5 Izinto eziluncedo kunye neengcebiso
Izibonelelo ezi-5 kunye neengcebiso ngokuthenga umxholo
NgoLwesibini, nge-6 kaDisemba ngo-2011 NgoLwesibini, nge-6 kaDisemba ngo-2011 UJenn Lisak Golding
Kule veki, sibuze iindwendwe zethu zisebenzisa Zoomerang ukuba baya kuze bathenge umxholo wokuxhasa ibhlog yabo okanye iwebhusayithi:
I-30% ithe Akukho! Ayinyani!
I-30% ithe unokuthenga Olunye uphando okanye idatha
I-40% ithe Ndiza kuthenga umxholo
Ngelixa ndiqondayo ukuthandabuza ukuthenga umxholo wangaphandle, sibone iziphumo ezintle kunye nabaxumi bethu DK New Media. Ngamanye amaxesha, kungcono ukucinga ngokuthenga umxholo wangaphandle njengokuqesha ikontrakta. Ngaba ungaqesha umntu oza kukunceda kwiphulo lakho lokuHlawula ngokuCofa (PPC)? Ke kutheni ungaziqeshi umntu akuncede ufumane uninzi lomxholo wakho? Nazi izibonelelo kunye neengcebiso xa usebenzisa umxholo wangaphandle:
1.Umxholo othengiweyo ukongela ixesha!
Uninzi lwethu luxutywe nge-imeyile, iiprojekthi kunye nezinye iinjongo zokuthengisa ngexesha lomsebenzi. Ngokukhutshelwa ngaphandle komxholo, kukunika ithuba lokujonga eminye imisebenzi kunye neenjongo zakho njengomthengisi. Ngapha koko, kumava ethu, ukujika komxholo kukhawuleze ngokukodwa, kwaye kungcono kodwa, kukusindisa ekuthatheni ixesha lokuphanda ngezihloko ezithile, ezinokuthatha ixesha elide kunokuba ubhale iposti yebhlog okanye umxholo!
2. Umxholo othengiweyo kufuneka ulungiselelwe ukukhangela.
Enye yeenjongo eziphambili zomxholo kukukunceda kwimizamo yokusebenza yeinjini yokukhangela. Uninzi lwababhali abakhutshelwe ngaphandle banolula, ukuba aluqhubekiyo, ukuqonda ukubekwa kwegama elingundoqo, ukulungiswa kwesiza okulula, kunye neemeta ezifanelekileyo. Ukuba ubhalwe kakuhle, umxholo wegama elingundoqo kwi-blog yakho okanye kwiwebhusayithi ihamba ngendlela ende ekufikeleleni kwiinjongo zakho zophando.
* Ndingacebisa xa ufuna umxholo wababhali ukuze uqiniseke ukuba ukuqonda kwe-SEO yinxalenye yenkonzo yabo. Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka ulungele ukubonelela ngamagama aphambili ekujoliswe kuwo kubabhali bokuqulathi ukuqinisekisa umxholo wokukhangela.
Cwangcisa ulindelo olucacileyo xa uthenga umxholo.
Xa ujonga umkhupheli, qiniseka ukuba ucacile malunga nolindelo lwakho kunye nohlobo luni lomxholo owufunayo kwindawo yakho. Kwakhona, chaza iinkcukacha kangangoko kunokwenzeka xa unxibelelana nabo. Ukuba ulindele ukuba iiposti zebhlog yakho zingeniswe nge-5 emva kwemini ngolwesiHlanu, seta olo lindelo. Ukuba ufuna ukuba umxholo wakho ube yinjongo endaweni yokuzithoba, qiniseka ukuba nayo iyacaca.
Kukho amanqanaba ahlukeneyo omxholo. Qiniseka xa uthetha nababhali besiqulatho ukuba ucacile kwinqanaba lomgangatho olindeleyo kuxhomekeke kufundo lwakho.
4. Nika ingxelo ngento nganye oyithengileyo.
Nokuba utshintsho oluncinci lunokuthetha umahluko wehlabathi. Xa umbhali womxholo engenisa iposti yovavanyo lwakho, qiniseka ukuthumela kwakhona utshintsho lwakho xa ugqibile ukuze baphinde bajonge kwaye babone ukuba utshintshe ntoni. Umzekelo, unokukhetha amanqaku ebhulethi ngelixa umbhali womxholo ebesebenzisa iideshi. Okanye ukuba awuyithandi xa umxholo usebenzisa amagama athi "wena" okanye "mna," mabaxelele.
5. Nika ababhali beziqulatho ukufikelela kwingxelo.
Njengomxholo ugcwele kwindawo yakho, bonelela ababhali bakho bomxholo ngamanani emilinganiselo kunye kubahlalutyi kwisiqwengana ngasinye somxholo ababonelele ngawo. Ngamanye amaxesha, eyona ndlela ilula yokuxelela umbhali womxholo ukuba leliphi iqhekeza lomxholo lelona lilungileyo kukubabonisa iziphumo. Ngale ndlela, banokuphinda baqwalasele umxholo abawunikileyo kwaye babone ukuba banokufaka njani ifomathi okanye indlela yokubhala kumaqhekeza abo alandelayo.
Nokuba uyathandabuza, zithabathele emanzini! Awusoze wazi de uzame kwakho, akunjalo?
tags: UkuThengiswa kweMpahlaababhali bomxholoAbabhali bekopiumxholo wangaphandleumxholo othengiweyoukuthenga umxholozoomerang
Holiday Ecommerce: Iselfowuni, iThebhulethi kunye neDesktop
Ixabiso lokuThengisa kuFacebook
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2011 ngo-10: 37 PM
Umntu othile wandibonisa into kanye… kwaye iyitshintshe ngokupheleleyo ingqondo yam.
UMongameli Obama unombhali wentetho. Umongameli mhlawumbi sesinye sezona zithethi zibalaseleyo sinazo kwimbali-ekhuthazayo, ecingayo kwaye enqabileyo. Andiqondi ukuba zincinci iintetho zakhe esazi ukuba omnye umntu ubhale la magama. Ndisakholelwa ukuba yeyakhe. Ndicinga ukuba yile nto bayenzayo ababhali bemxholo… bayakwazi ukubamba eyona nto iphambili kwinkampani okanye umntu ngamnye kwaye benze umsebenzi ongcono wokwabelana nabo. Elona xesha kuphela lokunganyaniseki kuxa ungakholelwa koko bakuthethileyo okanye bakuchaza gwenxa… kodwa luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba akwenzeki!
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2011 ngo-1: 38 PM
Ndisandul 'ukuhlangana nebhlog yakho kwaye ndinomdla kwiziphumo zakho njengomntu obhala iibhlog zeminye imibutho! Ndiyamangaliswa kukuba abantu abaninzi bengathatheli ingqalelo ukuhlawula umxholo, mhlawumbi bacinga ngeziqu zabo kuneebhlog zeshishini.
Ngethemba phakathi kwethu sinokubenza abantu baqiniseke ukuba kulungile, kwaye umbono olungileyo, ukufumana omnye umntu ukuba akubhalele ibhlog yakho!
Ndijonge phambili ekulandeleni iiposti zakho.
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2011 ngo-4: 14 PM
Enkosi ngengcaciso yakho, Sally! Ngokwenyani bendimangalisiwe kukuba abantu abaninzi benganyangekiyo nomxholo wangaphandle unikezwe incoko endibe nayo kunyaka ophelileyo okanye njalo. Njengeblogger yobuqu, andizukukhupha umxholo webhlog yam (ngenxa yokuba ndingathanda ukuchitha ixesha ukwenza lo mxholo), kodwa ngakumbi kwiibhloko zebhizinisi okanye zeshishini, andiboni ngxaki ngayo. Ndiyayixhasa.
Kwaye njengoDoug uthe, kukho iitoni zemizekelo yokwenyani yelizwe apho ababhali bekhopi bangasemva. Ukuba ulungile kunye nezo, kutheni ungalungeli oku? Enkosi kwakhona!
Okt 12, 2016 ngexesha 10:41 AM
Nangona esi sisithuba esidala, ndiye ndacinga ukuba ndiza kungena ngaphakathi. Ndivuma ngokupheleleyo ngokuthenga umxholo kwimithombo yangaphandle. Kule minyaka ndakhe iqela elilungileyo lababhali bangaphakathi endinokuhlala ndithembele kulo ngomxholo owahlukileyo. Kodwa xa besindwa kakhulu, kuya kufuneka ndisebenzise umthombo wangaphandle wokuthabatha islack! Ingxaki kukufumana indawo yokuthenga umxholo endivakalelwa kukuba uphezulu kumgangatho wam kuba ndingumntu olawula umxholo! Ndisebenzise phantse yonke imithombo onokuyicinga kwaye ndiphosa uninzi lwayo kwicala lezizathu ezahlukeneyo. Kunyaka ophelileyo, ndiye ndahlala kwi-LPA (LowPriceArticles.com). I-LPA yeyona nto ibalaseleyo yebhanti endinokuyifumana. Ukutshintsha ngokukhawuleza kwimiyalelo yam kunye nomgangatho ulunge ngokukodwa kwixabiso. Ndi-odola amanqaku angama-200 ngenyanga kubo kwaye kuye kwafuneka ndithumele nje ezimbalwa kuhlaziyo. Ngaba uza kufumana amanqaku ohlobo lwethsisi kubo? Hayi. Kodwa kule nto ndiyifunayo, iyandisebenzela.